Iziqu zezilwanyana: I-Totally Birm Photo Gallery
Uhlobo lweNyoni: Iinyoni njengeTotem
LweMfuyo. I-Canva Collage / Getty Izithombe
Iinyoni ngokubanzi zisinda. Baza kuqala ukukhetha ukundiza ukulwa. Bayazi kakuhle ukuba ukulwa kuyingozi. Nangona inqanawa ikhusela ingxaki: ukulimala okanye ukufa. Iintaka zinemifanekiso ephezulu. Basifundisa ukuqwashisa nokulungelelanisa. Izinyoni zimelela inxalenye yomoya kwaye nazo zifundisa ukuphefumla okufanelekileyo. Iintaka zeengoma zisifundisa malunga nezinto zokuphilisa zesandi.
Iitempile zeentaka zinamandla kwaye zinobushushu, zinobubele kwaye zinobubele, okanye nantoni na phakathi. Bona iifoto uze ufumane intsingiselo yeentatem ezibalulekileyo zeentaka. Legalari eneentlobo ezahlukeneyo zeentaka yiyonxalenye enye yegalari enkulu yezilwanyana. Uluhlu apha ezinye iindidi zegalari:
Ikhadiyali njengeTotem: Umgcini weVitalality
IKardinal Totem. Adam Jones / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: ukuzivuma, igazi-ubomi, amandla avuselelayo, uxanduva lweentsapho
I-cardinal, i-finch finch, ibonakala ngokulula kwezinye iintaka. AmaKardin abuye athambekele ekumanyeleni onke amaxesha ukuze kube lula ukubona unyaka wonke. Njengoko i-totem badibanisa ubuninzi okanye bakhonza njengesikhumbuzo sokuthi ubunobuthakathaka bunqongophala. Iyini izinga lakho lamandla ngoku? Kusenokwenzeka ukuba ufune ukukhawulela umgca wengubo ngombala othile. Amakhadidi aya kukhwaza umlozo ngokukhawuleza ukuba aqaphele ingozi, ngenxa yoko lekhadi elibonakalayo linokuba ngumqondiso wokuba uqaphele ingxaki enokwenzeka. Ikhadiyali yintsapho ejoliswe kuyo. Indoda inceda ngokutya kunye nokukhusela abantwana. Zibuze ukuba amalungu entsapho asemngciphekweni okanye afuna unyango olungakumbi.
Izinkukhu njengeTotems: Isibingelelo
IiNkukhu Zamahala zamahhala. Seb Oliver / Getty Izithombe
I-Crow njengeTotem: Uphawu lweSilitude kunye neNdalo
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ithuba, amandla omlingo, amandla, ukuphaphama
Iintlanzi ziintaka ezinengqiqo. Ziyakwazi ukuqonda izinto ezizungezile kwaye ziye zaziwa ukuba zincede iintaka kunye nezinye izilwanyana zasendle xa ingozi isondele kunye nobukho babo kunye ne-CAW ephakamileyo. Xa isihlwele sivakatye njenge-totem sinokuyilumkiso sohlobo oluthile. Kuwuphawu lokuba kufuneka uqaphele utshintsho okanye ukungafani kwimeko yakho okanye iimeko zokuphila. Iinkohliso zithathwa ukuba zinamandla amakhulu kunye neengqungquthela ziyesatshwa njengeziqhamo zenkxwaleko ezifana nesimo sezulu esibi, ukufa okanye ukugula. Iindlebe nazo zilungelelanisa nekhono lokwenza okungakumbi kunoma yiphina imeko, ukukhupha zonke ezinye iintaka kunye nezilwanyana. Njenge-totem isiqwenga sinokukunceda ukuvula ukufikelela kwizinto zakho ezipheleleyo.
Idada njengeTotem: Ubomi noThuthuzo
Duck Totem. UJames Hager / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: uxhulumano lweentsapho, ukuphulukiswa ngokomzwelo, iimpembelelo zokuthoba
Amadada adibene nenxalenye yamanzi. Bayabagibeli bamanzi abanzi bashukuma kwaye banelisekile ukuhamba phezu komzimba wamanzi. Njenge-totem idada ifundisa ukudibanisa nemvakalelo yakho ejulile ukwenzela ukuba ufike kwiimeko ezixhambileyo. Amadada abhekiselele kwintsapho kwaye banandipha. Ukuba ukutyelela idoki kunokuthetha ukuba lixesha lokubuyela kwiingcambu zakho kwaye uchithe ixesha kunye nentsapho yakho. U-Eckhart Tolle, othengisa ngokugqithiseleyo umbhali we-New Earth uhlala exelela ibali ngendlela amadada angayithandi ngayo. Baya kuphazamisa iintsiba zabo baze bangene kwi-snit kunye nelinye idada phezu kweenguqu kodwa emva kwemizuzu kamva impikiswano ikhohliwe kwaye idada lizolile kwaye lihlaziye elwandle. Iilisi ze-duck lisifundisa ukuba singabambeli kwiinkathazo zethu zangaphambili kwaye siphila ngexesha.
Ukhozi njengeTotem: Umhlaba kunye neZulwini
I-Eagle. Tom Breakfield / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo : ukomoya, ukulinganisela, iindawo eziphakamileyo, amandla angaphakathi, umbono, amandla kunye nokulawula
Inyolo emangalisayo kunye neyobuqwenga, inkozi ifunwa njenge totem. Unamachiza anamandla. Ukhozi luphakama phezulu esibhakabhakeni, kodwa luya kuhlaselwa phantsi ngokukhawuleza ukubamba imouse kwihlathi okanye intlanzi emanzini. Ngenxa yolu lukhuni lubhekwa njengento enxulumeneyo phakathi komhlaba kunye namandla angaphezulu. Ukhozi lukhangelele (imbono ephakamileyo yeentaka) ukuze ukwazi ukubona ixhoba layo emhlabeni. Njenge-totem ukhozi lubonisa ukuqonda okunzulu. Njengomthunywa ukhozi lunikeza iitalente zamabonari. Ukuba ukhozi luya kutyelela lunokuba nolwazi olunokuthi lube luncedo. Ukhozi lubonisa ukukhula ngokomoya . Xa ubona ukhozi lukhuphukela phezulu mhlawumbi ulungele ukuqhubela phambili kwinqanaba elilandelayo ngokomoya. Ukhozi lube ngumgcini womoya wesilathanga esempumalanga okanye i-quadrant yomoya yevili leMveli yaseMelika
I-Falcon njengeTotem: Hunter
Falcon Totem. Johann Schumacher / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: uxhulumano lobomi bexesha elidlulileyo, ukunyakaza okukhawulezayo, ubuchule bengqondo
I-falcon iyaziwa ukuba iqhube esibhakabhakeni ngokukhawuleza okanye ihlale isineke ngepherk ngelixa ikhangele ukuxhamla. Xa ixhoba laso liyabonakala, i-falcon iya kuhamba ngokukhawuleza ukuya emhlabathini ukuze iqoke izilwanyana, iinkumbi, iigundane kunye nezinye iigorantshi ezincinci. I-falcon isebenzisa ingqondo yayo, ukubala ukuhamba phambili ngaphambi kokuthatha isenzo. Isifundo i-falcon ifundisa njenge-totem kukuba ulinde ithuba elithile ngaphambi kokuba wenze ukuhamba kwakho. Ukuba uthatha isifundo se-falcon yesineke kunye nokucinga okucacileyo entliziyweni uya kufumana impumelelo ephezulu kunokuba ungaphumeleli.
I-Flamingo njengeTotem: Umbono
Flamingo Totem. UJoseph Devenney / Getty Izithombe
Imilinganiselo / Imilayezo: ibhalansi, umbono, umbala, ukuxhamla
Izihlobo: I-Crane, iSorkork
I-Flamingo njenge totem ifundisa ukubaluleka kokulinganisela. I-Pink umbala ohambelana nentliziyo ye-chakra , kunye nombala obomvu kwi-flamingos idlidliza ngeziko leentliziyo kunye namandla angokomzwelo. I-flamingo yombono obonisa amandla ayo emanzini. Xa i-flamingo yenza ukubonakala kwayo ungadinga ukudibanisa nomoya wakho. Zibuze ukuba ungekho ngandlela-thile ngandlela-thile. Ngaba uncike kakhulu kwinqanaba elilodwa? I-flamingo yi-totem enobuqhophololo kwaye inamandla enika uvuyo nothando. I-Flamingo isifundisa ukuba singesabi ukubonisa iimvakalelo zethu.
I-Goose njenge-Totem: Umncedisi
Goose Totem. Westend61 / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ukondla, intsapho, ukukhumbula iintsapho, abafazi bomphefumlo, injongo yokudibanisa
Izwi eliqhelekileyo lithi "Yintoni enhle kwi-goose, ilungele ukuhamba." Oku kubonisa ukuba imisebenzi yabesilisa kunye nabasetyhini inxaxheba kwiqela lentsapho elikhathalela abantwana babo abancinci. Amantombazane, njengama-swans, iqabane lobomi, efundisa ukubaluleka kokuhlonipha lakho iqabane lomntu. Ngumuphi umntwana ongenalo uMama weGoose Goose? Umama we-Goose umele ukukhulisa u-grand-mother archtype. Umntu onamathambo e-goose athatha amandla okunyusa kwaye uyaqonda ukubaluleka kwentsapho kunye nokwabelana ngemithwalo yomsebenzi. Iibhokhwe ziintaka ezifudukayo zinyuka kwi-v-formation, zijikeleza ngokubhakabhakeni ngokukhawuleza njengoko zihamba phambili. Banobuchule obufanelekileyo besikhokelo kwaye bayazi apho bahamba khona. Xa i-totem ye-goose ibonakala ungase uqalise ngokukhawuleza ngohambo (ngokomzimba okanye ngokomqondiso) nabanye ngenjongo yokudibanisa. Iqhwa lekhephu limelela i-totem yasebusika ye-totem yesondo lamayeza kwezinye iindawo zamasiko aseMelika.
I-Hawk njengeTotem: Umbono
I-Totk Totem. UDaniela Duncan / Getty Images
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ukuvusa ngokomoya, injongo yangaphakathi, ukunyaniseka, intlungu
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeehake. Iimpawu eziqhelekileyo ababelana ngazo ngamehlo abukhali, ubuchule bokuzingela obukhulu, kunye neendlela eziphambili zokuqhuma. Njenge-totem i-hawk ibonakalisa ukuphakama kumazwe aphezulu ekuqhelweni kunye nombono. Unokulindela uxhulumaniso nomoya ukuvula ngokugcwele xa kukho ukutyelela. Amandla e-Hawk ahlawuliswa kakhulu kwaye akafanelekanga. I-Hawk ibonisa ukuba ukubiza okuphezulu kuyaboniswa. Izilwanyana zeReiki Shaman, uRose De Dan , uthi i-hawk ebomvu-tailed ibonisa umlilo.
I-Hummingbird Totem: Ibonakalisa ubumnandi
Hummingbird Totem. UJack Milchanowski / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ubuncinane, ubuqili, isithembiso, uvuyo
Phakathi kwazo zonke iintaka zeentaka, mhlawumbi i-Hummingbird iyona imilingo. Bazisa ubuso bethu ngobuso ngelixa bebukele inxaxheba yabo ekhethekileyo. I-Hummingbirds ikwazi ukuhamba kwindawo enye isifundisa ukuba sisaphila kwaye sigxile kungakhathaliseki ukuba sisebenza njani. Xa ukutyelelwa kwe-hummingbird totem sikhunjuzwa ukuba siyiqonde ubomi obumnandi. Sonke sivile ilizwi elithi "Yeka ukuNuka iRos" kwaye uqonde oku kuthetha ukuthoba nokuthokoza ubomi. I-hummingbird ifundisa isifundo esifanayo esicela ukuba singcwabe iimfono zethu ngokugqithiseleyo size siphumelele i-nectar. Ubomi bunika uvuyo kunye nobumnandi xa sithatha ixesha lokuphefumula.
Kingfisher njengeTotem: Uxolo noPhumelelo
Kingfisher Totem. Sven Zacek / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ithuba, ininzi
Kubalulekile ukuba u-kingfisher enze ikhaya lakhe kufuphi namanzi ngenxa yokuba intlanzi kukudla okuphambili. U-kingfisher uloba amanzi ukuze aphile. Xa i-kingfisher iveza yona ingabonisa ukuba kufuneka usebenze ngaphandle kwendawo yakho yokuthuthuzela ukufumana izixhobo ezintsha. Kuba ngubani ophethe i-kingfisher njengoko i-totem yayo ithatha amandla okuba sisondele kumthombo wamanzi. Kingfisher ngumthunywa ozisa ubuninzi kunye nokuchuma.
Ihobe e lileyo
Ihobe e lileyo. UGabriel Dragu / EyeEm / Getty Izithombe
Ijuba elivuthayo, ilungu leentsapho zeejuba, londla imbewu, iinantyambo kunye neenhlamvu. Ingoma yeNkumba eLawulayo eyinika igama layo "i-coo elililayo" ekhuthaza ukukhathazeka ngokomzwelo. Xa ukutyelela iindlovu ukuvakashela kukuzibuze ukuba ufuna ukukhululwa komzimba. Imvakalelo yokuqala ingabangela iingxaki zempilo kunye nemiba yengqondo. Unokuba ufuna ukukhala kakuhle.
I-Osprey Totem / I-Fish Hawk
KaidoKarner / Getty Izithombe. Osprey Totem
Imiyalezo kunye neentsingiselo: obonwayo, oqiqayo, ukucinga kwangaphakathi
I-Osprey, aka "i-fish hawk" ihlala ngokubanzi ekudleni kweentlanzi. Ukuba i-totem ye-osprey ibonakala ingabonisa ukuba kufuneka udibanise intlanzi okanye ioli yeentlanzi ekudleni kwakho. Umzimba we-osprey ungumhlophe ngaphantsi obonakalisa amanzi ngaphantsi kweenqwelo zeenqwelo-moya xa ufuna ukuphanga. Isifuba esibonakalayo se-Osprey sifundisa ngaphakathi ngaphakathi njenge-totem. Nabani na osprey njenge-totem nabo kufuneka bafunde iimpawu zeehake ngokubanzi. Ie Hawks zibhekwa njengabonwabi ngenxa yobuso babo obuqilileyo. Ubukhulu kwiindawo zabo zokuhamba ngeenqwelo zokuhamba ziyamangalisa ukuba zibukele njengoko zihamba ezinzulwini.
Incini nje ngeTotem: Ukugxotha
Intsini iTotem. Ignacio Palacios / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo : ukunqumla okanye ukukhathazeka, uxhumano lomhlaba, umnqweno wokufunda
I nciniba yintaka enkulu kunazo zonke. Ngenxa yokuba ayinakuyibhabha isifundo sayo kubaluleka kokumisela, ukusifundisa ukuba singabi "sibaleke" okanye "ifiysi". Incini isifundisa ukuba sinokufikelela kwindawo ephakamileyo yokomoya ukusuka kumbono ojonge kakhulu. I-gravity iyinamandla yeenciniba, igcina isiseko. Incini nje njenge-totem ifanekisela umnqweno oqinileyo wokufumana ulwazi, oku kubonakala ngentamo ende eyalela phezulu kwindawo ephakamileyo yokufunda. Ukuba i totem yeencini ibonisa ukuba ingaba ngumyalezo omele ulungiselele ukunyuka ukuya kwinqanaba elilandelayo lokufunda.
I-Owl njengeTotem: Ubulumko obuphezulu
Owl Totem. Tom Brakefield / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ukukhohlisa, umlingo, iimfihlakalo ezifihliweyo zibonakalisiwe, isiprofeto, i-clairvoyance, i-clairaudience, ukuthula
I-owl ibonisa ubulumko nemfundo ephakamileyo. Ngenxa yamehlo enqabileyo yesohlwayo ibonwa njengombono omkhulu. Kwakhona kukho ukuva. Njengoko i-totem ingabonisa i-clairaudient ne-clairvoyant. Le ntaka yesantya ebizwa ngokuba yi "Keeper of Secrets Dark". I-totem ye-owl inokuxhamla kwicala elimnyama kunye nabafileyo. Ibhokhwe ihambelana neenkolelo kunye namandla omlingo. Nanini na apho isikhoksi sibonakala okanye uva i-owl ihlwitha ngobusuku kungenzeka ukuba imfihlakalo iya kutyhilwa kungekudala. Kwakhona, ukuba imfihlakalo yabelwe kunye nawe ngokuzithemba, isihlunu sikhonza njengesikhumbuzo sokuzukisa olo lwazi kwaye sigcine imfihlo ngasese.
IParrot njengeTotem: IsiLinguist
Parrot Totem. Ben Queenborough / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: ukukhanya kwelanga, umbala, isichazi, idiplomacy
I-parrot njengophilisi yayiza kubakho bobabini umgqirha wombala kunye nodokotela wengqondo. I-Parrot ingumlingo wemilingo osifundisa ukuba ihlabathi lizalisekile. Indima yeprotti yilezi zixhobo zokunxibelelana zokuvula ulwimi. Xa i-totem ye-parrot ibonakala ijonge ukubona ukuba ufuna uncedo ekuqondeni iimbono ezahlukileyo kuwe. Ingaba ixesha lokuba ukwandise ii-horizons okanye ubhalisele iklasi ukufunda ulwimi olutsha.
I-Peacock Totem: Ukuhleka noBungangamsha
Peacock Totem. Jose Antonio Antonio Santiso FernA! Ndez / Getty Izithombe
Iimpawu kunye nemiyalezo: ukubona kunye nokuvakala, uvuko, ukubukeleka, ukudibanisa karmic
Ipapi yinto ephawulekayo kunye nengqiqo ebonisa ukuhlakanipha kwangaphakathi. Nanini na i-peacock ityelela isimemo sokujonga imiba ephakamileyo ngokwakho ngomfanekiso wesiso eboniswe ngokubonakalayo kwayo kweentlobo zeentsiba. Iliso lakho isango ukuya kolwazi oluphezulu. Zibuze ukuba ufuna ukukhulisa imbono yakho kwaye ubujonge ngokubhekiselele kwimeko. Iimpawu ze-blues kunye nemifuno ehleliyo kwiintsiba zikhangeleka. Ngaba unamathele kwindawo ejikelezayo? Ngaba unako ukubonakalisa ukukhanya kwaye uphazamise iimvakalelo zomnyama? I-peacock isifundisa ukuma ngokuthe tye kwaye sibonise abanye bethu ngeetalente.
I-Penguin njengeTotem: Lucid Dreamer
Ipenguin njengeTotem. UMarkus Eichenberger Photography / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ngaphandle kwamava emzimbeni, ukuphupha okulukhuni, ukunyamezela, ukudlala
I-penguin yinkwenkwezi yokudada emanzini, kodwa ayikwazi ukuhamba. Sekunjalo, ukuguqulwa kwamaphengwini ukusuka kumanzi ukuya kumhlaba kukhawuleza. I-penguin iyakwazi ukukhupha ngaphandle kwamanzi kunye nomhlaba kwiinyawo zayo. U-Ted Andrews, umbhali we- Animal Speak ubeka i totem ye-penguin ngokukwazi ukuphuma ngaphandle komzimba . Ukuba i-penguin ibonakala iphupha eliphambili okanye ukubonakala kwe-astral kuyakufika lula kuwe.
Intshukumo ye-penguin emhlabeni ibonisa ukunyamezela okuqhubekayo kwaye isisu sayo sihamba kwiindawo ezinqabileyo zeqhwa kunye nokudlala. I totem ye-penguin ifundisa uxhulumaniso phakathi kwezinto ezibonakalayo kunye nokomoya. Esinye isifundo se-penguin sifundisa ukuba kukho ixesha lomsebenzi kunye nexesha lokudlala.
Pheasant njengeTotem: Umsindisi
Pheasant Totem. U-Erich Kuchling / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: amandla esondo, iindawo zokuhlala, izilwanyana zokuphila
I-pheasant isondla i-grains kunye neengca. Nabani ophethe i-pheasant njenge-totem inzuzo ngokubandakanya iinqolowa ezingaphezulu kwisondlo (i-oats, ingqolowa, ingqolowa, njl.) Imibala efudumayo ye-pheasant ibancedise ukuba badibanise ngotshani oluphantsi kweentlambo kwaye bahlale befihlakele kwizilwanyana zasendle . Ngokomlando, umsila womsila we-pheasant unxulumene nobulili. Ngenxa yeso sizathu i-totem pheasant ibonisa ukuzala kunye nobulili. Njengoko totem pheasant inika ubuchule bezesondo kunye neetalente zokuphila.
I-Pigeon njengeTotem: Umthunywa Wothando
Pigeon Totem. Dethan Punalur / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: uthando lwasekhaya, kwiminyaka yokuqala, ukukhathazeka kweentsapho
I-instinct "ye-homing" yesiqhelo yenza i-carrier yemiyalezo evela ekhaya. Amajuba ngokubanzi anxulumene nemiba yasekhaya neyentsapho. Njenge-totem ijuba lifundisa ukuba sibuyele kwiingcambu zethu kwaye sihlolisise ilifa lethu. Ukubona ijuba kungaba ngumyalezo ukujonga kunye namalungu entsapho ukuba ubone ukuba konke kulungile. I-Pigeon nayo isebenza njengesikhumbuzo sokuba sivela kwintsapho kwaye asiye sisodwa. Ijuba licinga ngekhaya njengendawo ephephile.
I-Raven njengeTotem: I-Shapeshifter
Raven Totem. D Reschke / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ubuxoki, isithunywa sokufa, isiprofeto
URobin njengeTotem: Umgcini wexesha lokusasa
URobin Totem. Johann Schumacher / Getty Izithombe
Iimpawu / Imiyalezo: ukudala, ukusekela, ukukhula okutsha, intsapho
I-robin eneebomvu zayo ezibomvu kunye neengoma ezixubhayo zisishukumisela kwithuba lempwasahlobo. Xa i-totem i-totem ibonakala ngathi ungalindela ukukhula okutsha okanye ukuqala kwesiqalo. Le ntaka idibene ne-spring equinox, iqinisekisa kwakhona ukubaluleka kweenguqu zonyaka. Ngaba uhlonipha utshintsho ebomini bakho okanye unamathela kwiipatheni zamandulo. I-robin isifundisa ukuba siqhubele phambili kwaye singesabi ukuzama izinto ezintsha. I-robin ithola ukutya kwayo emhlabeni, idonsa imifuno emhlabathini. Kuyi nyaniso ukuba intaka yokuqala ifumana imbungu! Zibuze, ngaba usebenzise ngokupheleleyo amathuba amatsha? Kwakhona, le nyathelo isikhumbuza ukuba simise imizimba yethu size siphucule amandla obomi emhlabeni ukusondla ngokomoya lwethu.
I-Sparrow njengeTotem: I-Survivalist
ISharp Totem. Nick Saunders / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ukuqinisekiswa, ukuzinyameka, ukusinda
Indlunkulu iyinxalenye yengoma evamile ebonisa ukubaluleka kweempawu eziqhelekileyo esabelana ngazo nabanye ebuntwini nasekufeni ngokubanzi. Indlunkulu ayicingi ukuba iyinto eqhelekileyo kwaye iya kuzibamba ebomini ukuqinisekisa ukuqhubeka kwayo. Indlunkulu njenge totem ikhumbuza ukuba uyayiqonda indawo yakho kwihlabathi. I-Sparrow ifundisa ukuba ufanelekile. Le totem ingabonisa xa uvakalelwa "ngaphantsi kweyona" njengesikhumbuzo sokuba ungumdlali obalulekileyo emhlabeni. Kulungile ukukhumbula ukuba umntu ngamnye unento ekhethekileyo yokufaka isandla kwisizwe. Le totem iyakubonakala nakubani na oye wenza izinto eziqhayisayo okanye uqeqesho lokufundisa ukuthobeka nokuthanda abanye.
Intshonkco njengeTotem: Iziqalo ezintsha
IStork Totem. olfo / Getty Izithombe
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: ukuzalwa, iziqalo ezintsha, ikhaya kunye nosapho, ukuzala
I-stork iphethe amandla omfazi okanye umama. I-stork igxininisa kakhulu kulutsha lwayo. Wonke umntu uyazi i-fairytale malunga nokuba zivelaphi iintsana. Kwibali sitsheliwe ukuba unogwabi uhambisa umntwana osanda kuzalwa emnyango wangaphambili. Iintsana zivame ukuzalwa ezinemibala ebomvu kumqolo weentamo zawo ezibizwa ngokuba nomthiwa ngokuthi "i-stork". Xa igororkor ibonakala ukuzalwa okanye ukuzalwa kwakhona kungekudala. I-stork igqithisa amandla omtsha. Ukubonakala kwayo kubonakala kuthatha utshintsho kwintsapho eguqukayo, enokuthi mhlawumbi ingaba yintsana ezalwe yintsapho. I-stork ifundisa ukubaluleka kwentsapho kunye nesidingo sokukhusela inxalenye yentsapho ngokupheleleyo. Xa igorigore ibonakala ungadinga ukuxhuma kwakhona kunye neengcambu zakho.
I-Swan njengeTotem: Ubuhle beNyaniso
Swan Totem. Umfanekiso weSithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ubabalo, umlingane womphefumlo, ukuvusa, ukuhlala ixesha elide
I-Swan njenge totem yonyango elinamandla. I-Swans inomdla, inamandla, kwaye ithambekele ekuphila ubomi obude kakhulu. Ngenxa yoko le nkwenkwe njenge totem ibonisa ubabalo, amandla kunye nobomi obude. Njengeentsholongwane ze-swans iqabane lobomi. I-swan ebonisa phezulu ingabonisa ukuba unayo, okanye umntu oza kudibana naye, ngumlingane womphefumlo. I-swan ifundisa ukuba kukho ubuhle kuzo zonke izinto. Njenge-archtype, i-swan iqala ubomi njengento "engxenyeni embi" kwaye iphinda iphinde ibe yinto ebuhle xa ikhulile. Ibali lezingane ziyingcamango yokukhula komphefumlo kwaye ifundisa ubuhle obungaphakathi. Umyalezo we-swan unokuba kuhle ukuba izinto azifani njengoko zibonakala ngaphandle. Khangela ngaphaya kokucacileyo.
UToucan njengeTotem: Ukwazisa
Toucan Totem. UWolfgang Kaehler / Getty Izithombe
Imiyalezo kunye neentsingiselo: ubuciko, ubukhwele, ukubonakala kwihlabathi, ingqalelo
I-toucan imela ukuthetha kunye nokubonakalisa. Ukubonakala kombala we-toucan kunye ne-bill enkulu kubonisa umnqweno oqinileyo wokubonwa nokuva. Xa i-toucan ibonakala ngathi i-totem yithuba lokuba uhambe phambili emthunzini uze uhlale ekukhanyeni kwekhayibhile kwithuba elithile. Ukuba unobunzima bokuthetha kwipilisi ye-toucan yomntu inokunceda ukucaca nokuphulukisa umlomo we-chakra blockages. I-toucan iyakubonakala naluphi na unqwenela ukunakisisa, kukunceda ukuhlenga isizathu sokuba uzive ngale ndlela. UToucan unokunyusa ukuzithemba kwakho. UToucan uphethe amandla eklasini-clown kunye ne-antics kunye nezwi elikhulu. Ukuba unomntu ovuthayo owusebenzisa ukugubungela ukungaqiniseki, i-totem i-totem ibonisa ukuziphatha kwakho kukubonisa ukuba ukhuselekile ukucima isisk kwaye ubonakalise ukuzenzeka kwakho okwenene.
I-Turkey njengeTotem: Iintsikelelo
Turkey Totem. Jim Cumming / Getty Izithombe
I-totem yaseTurkey ibonisa ixesha lokuvuna kunye neentsikelelo.
I-Turkey ifana nebhokisi. ingcwele. ngulowo onika ngokungenasiphelo. Ukuba ulandele i-wild turkey kwaye ujonge ufumane ezinye ukutya zokutya. Iintsiba sele zisetyenziselwa ukwenza iifowuni kunye nomgca wokugcina imvula. phantse yonke inxalenye ye-turkey ingasetyenziselwa into enye okanye enye kwaye inyani le nto iyindawo yokutya. Ku-Cherokee i-turkey yayingcwele njengotshanga ukuba akunjalo. I-Turkeys ifundisa ukulungelelanisa kuba yilokho eye yabancedisa ukuba basinde ekutshatyalaliswa kwehlathi labo. Bayabahlali beentlanzi kunye namaqanda amaninzi okugcina amaqanda kwisidleke esifanayo kunye nabo. oku kuqinisekisa ukuba usaphila kakhulu kuzo zonke iinkuku. Ifundisa amandla ngokuba emhlambini kwaye uvumele abanye ukuba bancede ekungabikho kokutya kuphela kodwa ukukhulisa abantwana bakho nokuba yingxenye yonke .... umthombo: I-Whitehorse Woman
I-Vulture njengeTotem: Isidima kunye nokunyamezela
UJuanvi Carrasco / Getty Izithombe. Intsundu iTotem
Iintsingiselo kunye nemiyalezo: imfihlelo, ukuphaphama, ukuhlanjululwa, umonde, injongo ephakamileyo
Iqoma njenge totem lifundisa ukubaluleka kwazo zonke iindima ezithathwa kuluntu. Ukuba inkunzi ibonakala ingaba isikhumbuzo sokuhlonipha inkonzo, kungakhathaliseki ukuba inkulu okanye incinci, ukuba unikezela abantu. Izidumbu zixhomekeke kwabanye ukubonelela ukutya kwabo, ngokusinda ngokuba ngabahlaziyizi, bedla isisele esishiywe ngabazingeli abakhulu. Njengoko i-totem ivulture ifundisa "ukungcola-kungekhona, ukungathandi" kunye nokukwazi ukwamkela uncedo lwabanye ngobubele nangesidima. Inqatha inomqondo ococekileyo wokunuka kumnceda ukuba athole inyama efileyo kunye neyokubola eyokuhlambulula. I-Vulture ikufundisa ukuba usebenzise "ubuchule benobukrakra" ukuze ukwazi ukuba zeziphi izinto ezondlayo kwaye ziyintoni into eyonakalisa umzimba wakho. Iqoma liyakwazi ukutya ukutya okuncibilikiweyo ngeebhaktheriya ezinobungozi ngenxa yesistim sokutya esichasayo izifo, kodwa oku akuyinyani ngokugonywa kwabantu. Xa ilungu libonakala lifuna ukuba uhlolisise imichilo yakho yokutya. Ngaba udla ukutya okufanelekileyo, okanye uzisa i-toxins eyingozi emzimbeni wakho?
Iingqungquthela zaseBengali zamaHindu zesiHindu
Ngaba Ndifuna Ukuzibamba Ngaphambi kokuba Ndiyicwebe Imoto Yami?